I-Clostebol i-acetate powder (855-19-6) hplc = 98% | I-AASraw
/ Imikhiqizo / Anabolics Steroids / I-Testosterone powder Series / Clostebol Acetate (Turinabol) powder
SKU: 855-19-6. Categories: I-Testosterone powder Series, Anabolics Steroids
I-AASraw inokukwazi ukwenza kanye nokukwazi ukukhiqiza kusuka kugremu kuya ku-mass mass ye-Clostebol Acetate (i-Turinabol) powder (855-19-6), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi elandelwayo.
I-Clostebol Acetate (i-Turinabol) ividiyo ye-powder
I-Clostebol Acetate (i-Turinabol) powder Abalingiswa
Igama: I-Clostebol Acetate (i-Turinabol) powder
Formula Yamamolekhula: C21H29ClO3
I-Melt Point: I-112-116 ℃
Umbala: I-White noma i-white powstalline powder
I-Clostebol Acetate (i-Turinabol) powder ukusetshenziswa komjikelezo we-steroids
Amagama ashukela ama-Raw Turinabol
I-Clostebol Acetate (i-Turinabol) powder (i-CAS 855-19-6), enegama le-4-chlorotestosterone, futhi enegama lomkhiqizo iTbol, Macrobin, iSteranabol, i-Alfa-Trofodermin, i-Megagrisevit.
I-Turinabol (i-Chlorodehydromethyltestosterone, eyaziwa nangokuthi 'i-Tbol' ne-Oral Turinabol) empeleni ifomu eliguquguqukayo le-Dianabol (iMethandrostenolone), lapho empeleni lihlanganisa izinhlaka zamakhemikhali zika-Dianabol noClostebol (4-chlorotestosterone). Ngakho-ke yingakho igama lamakhemikhali langempela yi-4-chlorodehydromethyltestosterone. Ukuguqulwa kwesakhiwo samakhemikhali ayo kuvumela ukuthi kube okungenakunambitheka futhi kube nokulinganisa okuncane kakhulu kwe-androgenic, okungenzeka ukuthi kungani iTurinabol ibizwe ngegama elithi 'i-Dianabol'.
Ukusetshenziswa kwe-Clostebol ye-Acetate powder
I-Turinabol inezinga eliphansi le-androgenic le-6 kanye nesilinganiselo samandla we-anabolic we-53, lokhu kwenza kube siphelele ngokuqhathanisa imiphumela nemiphumela emibi. Ngenxa yokulinganisa okuncane kwe-androgenic, i-acne, ukuhlukumeza, ukufutheka okunamandla namandla okwanda akuvamile, kepha akukhona. Uma kuqhathaniswa ne-hormone yayo yomzali i-Dianabol, i-anabolic ne-bodybuilders ebuthakathaka ayiboni i-Oral Tbol njenge-agent yokuthola okuningi.
I-Turinabol inakho cishe ingxenye yesilinganiso se-anabolic se-Testosterone, ngakho-ke ama-dosage ku-40-60mg ngosuku anikezwa njengesingeniso. Izinga le-Turinabol lingadlula i-80-100mg ngosuku, kodwa izici zomzimba zibika imiphumela emibi ziqala ukuphakama, kuyilapho ukuzuza kuqhubeka njalo.
Ngenxa yokwehlukana kwayo okuhlukile kwemiphumela yayo ye-androgenic ne-anabolic, i-steroid ebuthakathaka kakhulu kune-hormone yayo i-Dianabol. Kodwa-ke, isiqiniseko nge-Tbol ukuthi nganoma yikuphi ukubonakala kwekhono lokwakhiwa kwemisipha, kuzoletha okungenani ngendlela yemiphumela ye-androgenic futhi neze imiphumela ye-estrogenic (ngenxa yokuthi ayikwazi ukungena ku-Estrogen). Ngenxa yamandla aso obuthakathaka kune-Dianabol, amanani adingekayo ukufaka imiphumela evela ku-Tbol kubhekwa njengephezulu kakhulu (lokhu kuzochazwa maduzane kusigaba se-Tbol esilinganiselwa kule phrofayela).
Ngokuvamile, abagijimi nabazimba bomzimba bangalindela ukuzuza okunamandla okunamandla nokukhishwa kwekhwalithi ngaphandle kwengozi ye-bloating, gyno, noma yimuphi omunye umphumela we-estrogenic. Ukuzuza kwamandla nezimpande akuyaziwa ukuthi kuyamangalisa ngenxa yokungabi namandla kwamandla e-anabolic, kepha ukuzuza okunamandla nokwekhwalithi okukhula njalo ngokuhamba kwesikhathi kungalindelwa. Ibuye isetshenziswe njenge-agent agent yokusika ngesikhathi sokulahlekelwa kwamafutha noma ukulungiswa ngaphambi kokuncintisana ngenxa yokungakwazi ukuguqula ku-Estrogen. Amandla kaTurinabol akhanyisa ngempela njengezihambisana nezinye i-anabolic steroids lapho egijima (ehlanganisiwe) namanye ama-anabolic steroids ngenxa yokukwazi ukubopha ku-SHBG. Ukubophezela ku-SHBG kuvumela ukuthi amanye ama-anabolic steroids ahlanganiswe nawo ukuze atholakale ukwenza umsebenzi wawo, engabanjwanga yi-SHBG, okunye okuzuzisa ukuthi kuboniswe.
Isexwayiso ku-Raw Turinabol powder
Isicelo sesikhathi eside singabangela i-sodium, ukugcinwa kwamanzi, ngakho ukugcinwa kwe-sodium kubangelwa ukuvuvukala kwesiguli sesiguli. Isifo sesibindi, isifo sofuba, i-edema, iziguli zomdlavuza we-prostate kanye nabesifazane abakhulelwe bagweme ukusetshenziswa. Ukusebenzisa isikhathi eside kungabangela ubuncane besilisa besilisa.
I-Clostebol i-Acetate powder Ama-oda engeziwe
I-Clostebol iyi-AAS ebuthakathaka enokusetshenziswa okungasetshenziswa njengesidakamizwa esithuthukisa ukusebenza. Okwamanje ivinjelwe yi-World Anti-Doping Agency. I-Oral Turinabol, ehlanganisa izakhi zamakhemikhali ze-clostebol ne-metandienone, yayisetshenziswa kabanzi ohlelweni lwe-doping oluxhaswe nguhulumeni wase-East Germany.
I-tbol ivame ukuhlanganiswa namanye ama-anabolic steroids, lokhu kubangelwa ukuthi kube amazinga we-testosterone wemvelo ephansi futhi aphansi. I-Turinabol ayilona i-anabolic kakhulu noma i-androgenic ye-steroids, ngakho-ke ukutholakala kwama-mass ukuthola ama-overburn ngaphezu kwe-Tbol. Le anabolic enomusa isetshenziswa ngesikhathi sokusika, izikhathi zokulahlekelwa kwamafutha kanye nokwakhiwa komzimba ngaphambi kokuncintisana.
Imijikelezo ye-Turinabol ingahle isebenze ngomlomo kuphela phakathi kwe-40-60mg ngosuku ngezinsuku ze-6-8. Lokhu kuzokwenza ngcono amandla, ubuhlungu obukhulu futhi uvumele umsebenzisi we-steroid ukuthi alondoloze ubunzima be-muscle uma kunenkinga yekhalori. Ukuvimbela ukuphazamiseka kwamaprotheni yisikhali esidingekayo kakhulu lapho kufika ku-10% amafutha omzimba umgomo.
Ukufakwa okuphambili kakhulu kwe-Oral Turinabol kungasho ezinye izinhlanganisela ezifana; I-testosterone ingasetshenziselwa imiphumela ye-synergistic. Amalungiselelo aseTesttosterone afushane futhi ajwayelekile angasetshenziswa. I-Testosterone Propionate ku-100mg injected nsuku zonke ngelinye ilanga no-Turinabol 60mg ngosuku oluhlala njalo amaviki angu-8 iyimithi emihle kakhulu yokumisa imisipha enomzimba nokudliwayo ehlobo.
Phakathi kwemijikelezo eminingi ye-Testosterone, ngokwesibonelo, usebenzisa i-Testosterone Enanthate yamaviki e-12, umlomo uqaliswa emavikini wokuqala e-4-6 ngenkathi i-Testosterone "ikhahlela". Leli gama elisetshenziselwa ukuthi amazinga e-plasma azinzile asezingeni eliphezulu futhi azuze emasimini amaningi kanye namaprotheni synthesis asezingeni eliphezulu kakhulu.
I-Turinabol ingaveza imisipha enamandla futhi ehlala njalo. Ngakho-ke umgijimi oyisebenzisayo akufanele alindele ukuzuza ngokushesha amandla, isisindo nesisindo. Kuyinto "yesikhathi eside" i-anabolic steroid.
Ngenxa yesilinganiso sayo esincane, sisheshe sithathwe ngumzimba, okusobala okususa imetabolites ngokusebenzisa umchamo. Izivivinyo zokulwa ne-anti-doping ngokuvamile aziboni iTurinabol uma umgijimi eyeka ukwelashwa ezinsukwini ze-5 ngaphambi komncintiswano.
I-Turinabol ayiholele ekugcinweni kwamanzi ngenxa yokulinganisa kwamanzi namaminerali. I-androgenic encane kakhulu kunamanye ama-anabolics afana ne-Dianabol. Lesi sici senza abesifazane bakwazi ukuyisebenzisa kalula, nakuba kufanele baqaphele ukuthi bangadluli ubude bokunakekelwa okwenziwe.
Okokugcina, ukufaka endaweni ye-chlorine kuvimbela ukuxhumana ne-aromatase. Ngakho-ke kukhona ingozi encane yokuguqulwa kwe-gynecomastia noma i-DHT.
Ekuphetheni, iTurinabol iyi-steroid ehle kakhulu yokulungiselela umzimba wakho "ngokwemvelo". Ikhono layo lokwakha imisipha egcwele lisho ukuthi abagijimi abaningi bayayisebenzisa ngesikhathi sokuphumula (inkathi yokuphumula). Lokhu kuvumela ukuba balungele futhi baqinise imisipha ngaphandle kokuthola mass.
I-Clostebol i-Acetate powder edayayo (CAS 855-19-6)
I-Half Life: Amahora we-16
Isikhathi sokuthola: 11 - izinyanga ezingu-12
Isilinganiso se-Anabolic: 54
Isilinganiso se-Androgenic: 6
I-Clostebol ye-Acetate powder Marketing
Indlela yokuthenga i-Clostebol i-Acetate powder (i-CAS 855-19-6): Thenga i-Turinabol powder kusuka ku-AASraw
I-AASraw inikeza ubumsulwa 99% Clostebol I-Acetate i-powder eluhlaza kuma-bodybuilders noma ama-labs angaphansi komhlaba.
Ama-Raw Clostebol Acetate (i-Turinabol) Ama-Recipes okupheka:
Imiphumela yeClostebol I-acetate powder: Kungani abantu bebathanda i-Tbol?